I-china Fithem ks-011b umculo ongangenwa ngamanzi intambo ye-bluetooth intamo elenga abakhiqizi bamahedsethi wokudlala nabaphakeli | Kaiwansi
Ks-012 fithem amageyimu ezemidlalo engenantambo ihedsethi bluetoo ...
I-Fithem ks-011b yomculo ongangeni manzi i-bluetooth n ...
I-Fithem Ks-009SBluetooth engenantambo yokudlala amanzi ...
Isikebhe se-Fithem ks-020 bluetooth wireless earphone boss ...
I-Fithem ks-016 i-wireless stereo neckband bluetooth Chi ...
I-Fithem ks-011b yomculo ongenamanzi intambo ye-bluetooth entanyeni elenga ihedsethi yokudlala
Ukuma komkhiqizo kuyisiqeshana se-silica gel. Lolu hlobo lwehedsethi ngeke luzizwe isisindo sehedisethi lapho ligqokwe entanyeni.
1. Ukwakheka komkhiqizo kuyisiqeshana sejelisi le-silica. Lolu hlobo lwehedsethi ngeke luzizwe isisindo sehedisethi lapho ligqokwe entanyeni.
2. Indaba yokukhishwa ingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Okokufaka kanye nelogo ukupakisha nakho kuhle kakhulu futhi kuhlangabezana nombono womphakathi.
Ingemuva lephakeji lami lizinzile kakhulu ngombala omnyama ngemuva, kanti uhlangothi lumhlophe, kumhlophe futhi kumnyama kuyimfashini, futhi isitayela sokuklanywa sisonke sinempilo. Isithombe se-earphone enkabeni yebhokisi sicacile shazi, futhi siboniswa ngokusobala kakhulu phambi kwabantu. .
3. Ukusebenza okungenamanzi kuhle kakhulu. Izinga elingangenwa amanzi yi-IPx5. Yize ingakwazi ukunciphisa umsindo, inganciphisa umsindo ngokomzimba. Izinto zokufaka izindlebe nezindlebe zisondele kakhulu. Lokhu kwehlisa kakhulu umsindo wangaphandle futhi kuqaphele ukwehliswa komsindo ngokomzimba. Izindlebe zamaphiko oshaka kukhona futhi Kuhle kakhulu ukuthi ihedsethi ngeke iwe ngenxa yokuvivinya umzimba okukhulu ngesikhathi sokuzivocavoca, futhi okhiye bokusebenza kwehedsethi nabo kulula kakhulu ukusebenziseka. Kuphindwe kwethulwe ngababili bama-earplugs. Kukhona nentambo yokushaja i-usb, kanye nencwajana yomkhiqizo nekhadi lewaranti.
I-Chipset I-QCC 3024 BK3266
Uphondo ububanzi M9MM
Isipikha seSipika 16Ω
Impendulo ejwayelekile 20Hz-20KHz
Umthamo webhethri 220mAh
Isikhathi sokusetshenziswa 300hours
4. Ukusetshenziswa kwama-earphone kusebenziseka kalula, kuyafana namahedfoni ejwayelekile e-Bluetooth. Uma uyisebenzisa okokuqala, cindezela bese ubamba inkinobho yokusebenza kuze kukhanye isibani esiluhlaza okwesibhakabhaka ngokushesha kwisimo esivaliwe, lapho ufaka imodi yokubhanqa, thola le KS-011B kudivayisi, bese uyayixhuma.
Langaphambilini I-Fithem Ks-009SBluetooth engenantambo yokudlala imidlalo engenamanzi nezindlebe zasekhaya
Olandelayo: I-Ks-008 fithem yokudlala amanzi engenantambo i-headset ye-bluetooth ne-headset yesikebhe umsizi omuhle wehhovisi lezemidlalo nokungcebeleka
Ks-008 fithem Manzi yokudlala engenantambo blueto ...
I-Fithem ks-020 i-Bluetooth wireless earphone boss ...
Ks-012 fithem udlala ezemidlalo engenantambo amahedisethi bl ...
Ikheli: 2nd Floor, No.149, Shahe Avenue, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Isifundazwe Guangdong, China